विश्व कप अगाडि पाकिस्तानमाथि अफगानिस्तानको सनसनीपूर्ण जित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विश्व कप अगाडि पाकिस्तानमाथि अफगानिस्तानको सनसनीपूर्ण जित
काठमाडौं । आगामी मे ३० बाट इंग्ल्याण्ड र वेल्समा क्रिकेटको महाकुम्भ विश्व कप शुरु हुँदैछ । विश्व कपको तयारीका लागि सबै १० टिम इंग्याल्याण्ड पुगिसकेका छन् । इंग्ल्याण्डको वातावरणमा घुलमिल हुन आईसीसीको नियमअनुसार टिमहरुबीच अभ्यास खेलहरु पनि भइरहेका छन् ।
शुक्रबार उदयीमान टिम अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच भएको अभ्यास खेलमा उलटफेर गर्दै अफगानिस्तानले पाकिस्तानलाई ३ विकेटले हराएको छ । २६३ रनको लक्ष्य पाएको अफगानिस्तानले ७ विकेट गुमाएर दुई बल बाँकी रहँदा विजयी रन बनायो ।
अफगानिस्तानको जितमा ब्याटिंगबाट विष्फोटक ब्याट्सम्यान हजरतुल्ला जजाईले २८ बलमा ४९ रनको योगदान दिए भने हशमतुल्ला शाहिदीले नटआउट ७४ रन बनाए ।
पाकिस्तानका वाहब रियाजले ३ र इमाद वासिमले २ विकेट लिए ।
यसअघि पाकिस्तानले बाबर आजमको शतकको सहयोगमा २६२ रनमा अलआउट भएको थियो । आजमले ११२ रन बनाए । यस्तै सोयब मलिकले ४४ रन बनाए ।
पाकिस्तानलाई सस्तैमा अलआउट गर्न अफगानिस्तानका मोहम्मद नबीले ३ विकेट लिए भने दौलत जर्दान र राशिद खानले समान २–२ विकेट लिए ।